Ogaden News Agency (ONA) – Ciidanka Wayaanaha Oo Rasaas Kufuray Shacab Gobolka Xabashida Kushirayay.
Ciidanka Wayaanaha Oo Rasaas Kufuray Shacab Gobolka Xabashida Kushirayay.
Wararka aan kahelayno Gobolka Axmaarada ayaa sheegaya in ciidanka wayaanahu rasaas ooda uga qaadeen dad shacab ah oo kasoo jeeda qoomiyada Xabashida oo shir kulahaa gudaha Gobolka Axmaarada, warka ayaa intaas kudaraya dadka shacabka ah ay ka arinsanayeen mustaqbalka qoomiyada xabashida oo kamid ah dadka kuhoos nool xukunka kali taliska ah ee TPLF waxayna wax iska waydiinayeen sidii qoomiyada looga hoos bixin lahaa xukunka macangaga ah ee TPLF.
Ciidanka nabad sugida wayaanaha ayaa lagu soo waramayaa in ay rasaas nool u adeegsadeen dadkii shacabka ahaa waxayna ka dhigeen qaar ay xabsiyada dhigaan iyo qaar ay ugaysteen dhaawacyo daran.
Sida warku sheegayo iska hor imaad kan lamid ah ayaa dhacay Axadii aan soo dhaafnay kaasoo ciidanka wayaanahu ay dad shacab ah ku wax yeeleeyeen, dadka shacabka ah ee qoomiyada Axmaarada ayaa wacad kumaray in ayna joojinaynin shirarka iyo mudaharaadada ay aayahooda kaga uga tashanayaan waxayna ugu baaqeen dadka udhashay qoomiyada in ay fadhiga iskaga kacaan.
Dhinaca kale saraakiisha ciidanka nabad sugida ee wayaanaha ayaa sheegay in ay gacan bir ah ku qaban doonaan dadka kacdoonka wada ooy ku sheegeen Ardayda iskuulada, macalimiinta iyo ganacsatada kuwaasoo ay ku tilmaameen qas wadayaal.
Sikastaba ha ahaatee mudaharaadada looga soo horjeedo xukuumada TPLF ayaa gaadhay meel aan Waxba laga qaban karin waxayna saraakiisha wayaanahu ku wareereen qaabkii ay wax uga qaban lahaayeen.